Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "I-GUmshini oal". Indaba yethu ye-Callum Wilson Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela esikhathini sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendaba, udumo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumqambi womgomo osungulwe. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Callum Wilson's Biography ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, igama lakhe eligcwele ngu-Callum Eddie Graham Wilson. U-Callum Wilson njengoba eyaziwa wazalwa ngo Usuku lwe-27th kaFebhuwari 1992 kumama wama-Jamaican nobaba wesiNgisi eCoventry, e-United Kingdom.
Ngokungafani nabaningi bebhola laseBrithani, uWilson akazange abe nokuphila okungcono kwezingane. Ubaba wakhe waseJamaican wamshiya kanye nomama wakhe ngesikhathi esemncane.
Noma yimuphi umntwana oye waphila ngokusebenzisa ukuphumula komzali ikakhulukazi ukuba ubaba wakhe ayanyamalala uzokwazi kuphela ubuhlungu obukhulu obungokomzwelo obungabangela. Lokhu kuyisici esibucayi endabeni yokuphila kwasekuqaleni kukaFumumum Wilson.
UWilson wakhula yedwa nomama wakhe kamuva owaba nezinye izingane ezinhlanu, abazalwane abathathu nodadewabo ababili. Ukuphila kwakhe kwasekuqaleni kwakugcwele ubunzima. Noma kunjalo, wafunda ukuma ngezinyawo zakhe ezimbili ngaphandle kokuba ubaba ebonakala nxazonke. Lokhu kwenziwa ukuze ubeke isibonelo kubantakwabo.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Ukubeka Isibonelo
Ekuqaleni, ukubamba iqhaza kukaWilson emisebenzini yebhola kwamqondisa ekukhethweni okungalungile ayengayenza lapho esemncane. Waqala uhambo lwakhe lwebhola ngecala eliphumelelayo neCoventry. Ngokungafani nabanye abashayeli bebhola, u-Callum wayengenazo iziphakamiso zabazali bakhe kulokhu, umama wakhe. Ngamazwi akhe;
Umama wami wagcwalisa izandla zakhe. Kwakuyinkimbinkimbi lapho ngimkhulela ukuba angithathele ekuqeqesheni. Wayengumama ongabodwa ocindezeleka kakhulu kuye. Kwakungabangani bomndeni nabalingani beqembu ukuthi bangikhuphukela emhlabathini wokuqeqesha.
UWilson ngesinye isikhathi wayengazizwa ekhululekile njengoba ezwa ukuthi ube ngumthwalo kubasizi bakhe. Ukuqeda ukuthembela kubantu ekuphakamiseni kwamenza wayeka ukuqeqeshwa kwakhe ukudlala iqembu lakhe laseSonto Lendawo.
Naphezu kokushintsha kwengqondo, u-Wilson akazange athole ukwaneliseka ayekufisayo ngenkathi edlala ngeSonto League. Wazizwa ukuthi wenze isinqumo esibi esingahle sonakalise amathuba akhe okuba ngumqeqeshi wezemidlalo. Emuva ngalesosikhathi, waphupha amaphupho akhe, waba nemali enkulu futhi wayenakekela amalungu omndeni wakhe. Ukucatshangelwa okuqhubekayo kulokho kwenza uWilson ukuba ashiye iSonto Likabhola lebhola ngakho-ke abuyele emuva ekulingweni noCoventry. Ekhuluma ngalokhu okuhlangenwe nakho, washo njalo ngamazwi akhe;
Ngazama futhi lapho ngingu-12, angizange ngiyithande, ngabuyela eqembu lami leSonto futhi. Ngesithathu ngayazi ukuthi uma ngifuna ukuba ngumqeqeshi, kwakudingeka ngigxilise futhi ngithwale iziphakamiso kwabanye abantu.
Isinqumo sokugcina sikaWilson sokuhlala eCoventry sibonisa ukuqala komsebenzi wakhe wezobuchwepheshe.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Ukushiya Ikhaya
UWilson ngemuva kwecala lakhe lesithathu eliphumelelayo neCoventry wanquma ukunamathela ngokugcwele neqembu lezintsha. Njengomfana osemusha, wonke u-Callum wayefuna ukuthi abe nendawo yakhe yokuhlala ngenxa yemvelo egcwele kakhulu yomndeni wakubo. Ukuhlala kude nomkhaya kwakusho ukuthi kuzoba neziphazamiso zero. Ibhola ekugcineni yaba isizathu esihle sokuba umama wakhe amkhulule ekhaya.
Ngemva kokukhululwa kwakhe ekhaya, uWilson wathola isikhala esiningi nesikhathi sokusebenzisa nabangani bakhe futhi abe nguye. Ekhuluma ngesinqumo sakhe, uWilson usho njalo;
Ngingumuntu manje othanda inkampani yami. Kuhle ukukwazi ukukhulula inkululeko yami nokuthula.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- I-Multiultasking ku-Sports
UWilson ngenkathi ehlelwa yi-Coventry yentsha wanikezwa ithuba lokudlala ibhola lezemidlalo ngezinye zezemidlalo. Ngokombiko, uthathe iqhaza ekwenzeni i-kickboxing iminyaka embalwa. Ekhuluma ngesipiliyoni sakhe sokugijima, wake wake wathi;
Nganginezimpi ezintathu kuphela. Ngokusobala, nginqobile zonke ezintathu. Kwakungokukhwabanisa kwezobuchwepheshe. Ngaleso sikhathi, ngazibona ngenza abaphikisi bami bekhala kanzima lapho ngibabethela ukulwa.
Nakuba uWilson engavumeli uKickboxing ukuba amthinte ngokuphelele njengoba amehlo akhe aphelelwe isifiso esikhulu kakhulu sokuba ngumdlali webhola lezemidlalo. Kodwa-ke, kwakuyiziphonso ku-kickboxing eyamcindezela.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Kunzima Qala Ekusebenzeni Okuphezulu
Ngesinye isikhathi, uWilson waxoshwa ngokuphelele ekhaya lakubo kanye nokuvakasha kanye ngenyanga. Wahlala endaweni yakhe yaseCoventry, wayengakwazi ukupheka futhi adle athathe ukudla usuku lonke. Lokhu "ukudla okusheshayo nokulula"Indlela yokuphila yabuya ukuze imzingele. Ukudla okuningi kwama-burgers akuzange kwenzeke kahle kakhulu ngezidingo zakhe zemidlalo. Lokhu kwambona uWilson ekuqaleni komsebenzi wakhe omkhulu ezama ukuhlala efanelekile ngisho nokuphuka izinyawo kathathu.
Ukulimala okuqhubekayo wabona intuthuko yakhe eCoventry City yanyuka ngenxa yokwesaba komsebenzi wakhe namaphupho afika ngokushesha.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Indlela Uthando Lwamsindisa Ngayo
Ngokumangalisa, Ukulimala kuka-Wilson ekuqaleni kwakhe kwaqala ukususa kusukela ngesikhathi esithola ngayo intombi eyamkhombisa indlela yokudla njengomdlali. Lesi yisikhathi lapho eqala ukuphenduka waba umdlali kamuva emhlabeni.
UWilson wahlangana nomlingani wakhe ogama lakhe linguTatcey ngenkathi engu-17 futhi wayengu-19 (iminyaka emibili kunomdala). U-Stacey wamisa uWilson ekudleni ukudla okudlayo okubizwa ngokuthi okusheshayo futhi kulula. Ngemva konyaka wokuhlangana, uWilson wathuthela endlini yakhe eyamsiza ukuba athuthuke emsebenzini wakhe. U-Stacey wamtshela amasaladi nokudla okunempilo, futhi kusukela ngaleso sikhathi, izinkinga zakhe eziqhubekayo zokulimala zagcina sezifile. Bobabili abathandi banquma ukuhlala iminyaka emihlanu ngaphambi kokushada.
Bonke, banendodana okuthiwa i-Oritse nendodakazi ka-Orlagh.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ukuzibandakanya kuka-Asides Stacey othandweni nasempilweni yakhe, ithuba likaWilson kuCoventry lafika lapho uSteven Pressley eba ngumphathi wabo ngo-2013. Wahlaba umxhwele umphathi wakhe nabalandeli ngokushaya amagoli angama-22 kuPremier yokuqala kwisizini ka-2013-14.
Ngenhlanhla, umgomo wakhe wokuvula isikhathi kwakuyisikhathi sokuthi uBournemouth aqale ukufuna umdlali Lewis Grabban owayethengisiwe eNorwich City. Basayine i-Wilson ngo-£ 3.5m ngo-July 2014. Ngaleso sikhathi, Eddie Howe waqala ukuphuza idayimani elibi futhi imigomo ye-Wilson's 23 yasiza uBournemouth ukuba athole isihloko seMidlalo.
I-Callum Wilson Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
UWilson unobungane futhi uhlanganyela, uhlale ehleka futhi ehleka, futhi ukhuluma ngokukhululekile ngemvelaphi yomndeni wakhe.
Indlela Yokuphila Yokukholelwa EzeniUyazi yini? ... UWilson uyakholelwa ngezinkolelo ngenombolo yakhe yehembe.
I-jersey ye-13 ayikho into engafanele kwabanye kepha hhayi yona. Esivumelwaneni sakhe;
Ngahamba ngenombolo ye-13 ngoba izinto ezimbalwa zenzekile ngosuku lwe-13th lwezinyanga ezithile. Ngosuku lwe-13th lwenyanga ngilapho ngidlulisa ukuhlolwa kwami ​​kokushayela, ukuhlolwa kwami ​​kwe-theory futhi nginesifundo sami sokuqala sokushayela. Futhi, umfana wami omncane wazalwa ngo-13th.
Ingamashumi amabili nenye inomboro ebalulekile. Ekhuluma ngalokho, uWilson usho njalo;
Njalo lapho ngibheka ifoni yami ephathekayo ngaphambi kokulala, kubonakala sengathi kusho i-22: 22. Ngacabanga ukuthi kufanele kusho okuthile esikhathini esizayo. Okumangalisa lapho kwenzeka ukuthi ngigcine ngifaka imigomo ye-22 ye-Coventry.
Ukudlala okuvela kumsuka womndeni: Ukubuka ngejubane lika-Callum Wilson kunikezela ukuqonda isizinda sakhe somndeni waseJamican. Ukuqonda lokho kusho ukuthi uzuze ijubane lakhe kubazali bakhe ababalekile.
Ekhuluma ngesivinini sakhe, uyise nomndeni wakhe, i-Callum yashilo;
Angazi ngempela lutho ngobaba wami. Angazi ngempela okuningi mayelana nesizinda sakhe. UngamaJamaican namaJamican ngokuvamile abadlali abaningi. Ubonile Usain Bolt.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda Indaba yethu ye-Callum Wilson yezingane kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.